Mediatek ga-ewebata chipset 5G ọhụrụ dị ọnụ ala n'izu na-abịa | Gam akporosis
Mediatek iwebata chipset 5G dị oke ọnụ n'izu na-abịa
Ezigbo ozi ọma maka ndị na-ege ntị na Mediatek: ụlọ ọrụ na-emepụta semiconductor iji kpọsaa chipset ọhụrụ n'izu na-abịa nke ga-enwe nkwado maka netwọk 5G Na, dị ka atụmanya, ọ ga-abụ nnọọ oké ọnụ.
Enweghị ọtụtụ ozi na mpempe ọhụrụ a. Njirimara na nkọwapụta nke ikpo okwu mkpanaka a ka bụ ihe nzuzo, mana ihe doro anya bụ na n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ anyị ga-amata ya nke ọma ma nye ya nnabata obi ụtọ.
Ebe ọ bụ na e kwuru na ọ bụ SoC dị ọnụ ala, enwere ike ịnye ya n'ọdịnihu dị nso na ọdụ ndị dị n'etiti. Akụkụ a enweela Dimensity 800, otu n'ime ihe nhazi 5G kachasị akụ na ụba nke oge a arụnyere ugbu a na ngwaọrụ dịka Opo A92s.
Oppo A92s bụ ngwaọrụ na-ere ihe ruru euro 300 na elu ma bụrụ etiti. Nke a nwere ihuenyo 6.57 nke anụ ọhịa IPS LCD nwere mkpebi FullHD +, 6/8 GB Ram na 128 GB ohere nchekwa dị n'ime. Ọ na-abịa na batrị ikike 3,890 mAh nwere nkwado ngwa ngwa yana 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MM quad n'azụ igwefoto na 16 MP + 2 MP igwefoto abụọ.
Mediatek ọhụụ 5G ọkwa ọkwa
A nụrụ asịrị na aha njirimara nke mgbawa ọhụrụ Mediatek nke anyị ga-amata n'oge na-adịghị anya bụ MT6853 na, na mgbakwunye na e mepụtara maka etiti, enwere ike iji ya na ngalaba ntinye aka. Nke a ga - apụta na obere njedebe ga - enweta ya, nke, n’aka nke ya, ga - eme ka ị nweta teknụzụ 5G na ngwaọrụ nwere ọnụahịa dị n’etiti 100 na 200 euro. Ọ bụrụ otu a, ọ ga-abụ nzọ na-atọ ụtọ n'ezie na ụlọ ọrụ dịka Samsung's Exynos na Qualcomm ga-eche ihu ozugbo enwere ike, ebe ha enyebeghịrịrị chipsets 5G na ngalaba mmefu ego ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mediatek iwebata chipset 5G dị oke ọnụ n'izu na-abịa
Sony Xperia L4 dị ugbu a na Europe